Warri Kuubaa waggaa 50ffaa ajjeefamuu Chee Guveeraa yaadachaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Warri Kuubaa waggaa 50ffaa ajjeefamuu Chee Guveeraa yaadachaa jiru
Goodayyaa suuraa Lamiileen Kuubaa hedduun Chee Guveeraa akka gootaatti ilaaluun
Kabaja yaadanoo waggaa 50ffaa qabamuu fi ajjeefamuu mallattoo warraaqsaa bilisummaa Kuubaa, Eerneestoo Chee Guveeraatiif namoonni kumaatama hedduun lakkaa'aman magaalaa Saantaa Kilaaraatti argamanii jiru.
Innis Onkololeessa 9, 1967 Booliiviyaa keessatti ajjeefame.
Namoota siidaa Chee Guveeraa biratti sassaabaman keessaa, hiriyaa isaa duraa fi pireezidaantii Kuubaa kan ta'an Raawul Kaastiroo isaan tokko dha.
Kaastiroon abaaboo adii siidaa isaa jala yoo kaa'an, lammiileen hedduu TV'n daawwatanii jiru
Goodayyaa suuraa Dhaloonni Chee Guveeraa, Raawul Kaastiroo dabalatee gara baduutti jira
Abbaan warraaqsaa kunis akkuma yeroo lubbuun ture taasisaa turetti, ammallee namoonni yaadaan gargar akka ba'an gochaa jira.
Kuubaa iddoo hundatti maqaan isaa waggoota kurnan shan darbaniif leellifameera, qarshii irratti maxxafamuu fi biilboordiiwwan irratti baa'uu dabalatee, suuraan isaa Laatiin Ameerikaatti hedduu kan beekamu dha.
Itoophiyaatti, keessumaa dargaggoota biratti ammallee hedduu beekama.
Magaalaa Saantaa Kilaaraa - injifannoo inni dirree qabsootti galmeessiseen wal beektu keessatti namoonni argaman, Tii-shartiiwwan suura isaa qabatan kaawwachuun akka gootaatti yaadataniin.
Achitti kan argaman, nama naatoo guddaa qabuufi araara hin beekne, Arjantiinaatti dhalatus akka ofiitti kan guddifatan kabajachuuf sassaabaman
''Baay'ee ofitti dhiheessinaan, yeroo hunda nu waliin jira. ''Chee'n'' Kuubaa akkasumas Laatiin Ameerikaa fi adduunyaa bakka bu'a. Suuraasaa laphee fi onnee keenyarra kaawwachuun keenya nuuf kabaja guddaa dha.'' jedha hirmaattota keessaa tokko.
Goodayyaa suuraa Chee Guveeraa (harka bitaa) fi Fiidel Kaastiroo (harka mirgaa) yeroo warraaqsa bilisummaa bara 1959 dursaa turanitti
Haasawa Fiidel Kaastiroon bara 1967 tti du'aatii Chee Guveeraa ilaalchisee taasisan keessaa, gabaabinaan kan dhaggeeffatame yoo ta'u, yeroo sanatti dargaggoonni Kuubaa akka isaa akka ta'aniif waamicha dhiheessanii turan. Kun ammoo dhaadannoo ammallee calaqisu dha.
Baay'ina barattootaa yaadannoo kana irratti argaman irraa ka'uun, seenaan Guveeraa, qaama barnoota dargaggootaaf kennamu ta'uun waggoota hedduuf itti fufuunsaa akka hin oolle himuun ni danda'ama.
Deeggartoonni isaa akka fakkeenya cimanii hojjechuu fi aarsaa of gochuutti yoo ilaalaniin, warri isa qeeqan ammoo akka nama hamaa fi gara jabeessaatti fudhatuun.
Akka gootaattis ta'e akka mankaraasaa dhiiga dheebootetti yoo fudhatames, dhugaan tokko jira - inni qaama dhalootaa Kuubaa keessaa badaa jiruuti.
Jaalleewwan Chee Guveeraa du'a gayii Fiidel Kaastiroo bara darbee irratti argaman hedduun Umuriin isaanii 80 ol ta'eeraan.
Raawul Kaastiroon bara dhufutti aangoorraa bu'uufi, kun ammoo waggoota 60 booda yeroo duraaf namni maatii Kaastiroo'n ala taa'e masaraa mootummaa seenuu danda'a jechuu dha.
Pireezidant Tiraamp ‘Raashiyaa waliin shira hin xaxne’
Barsiisaan Keeniyaa badhaasa barsiisota addunyaa mo'ate
Haleellaa Somaaliyaatti qaqqabeen Ministirri ajjeefame
Dhuguma leenjiin paayilatootaa balaa sana waliin walqabataa?
Wal dhabdee daangaa Boosatiifi Fantaalleetti uumame
Yaaddoowwan ijoo jijjiirama kanaa maal?
'Finfinnee irratti bakka bu'iinsa uummataa qaamni qabu mana maree kana qofadha'
Fesbuukiifi Tiwitarri Uhuruu Keeniyaattaa jalaa 'butame'
Falmii mariitiin mo'achuuf maaltu murteessaadha?